QOMO dia marika amerikanina sangany ary mpanamboatra eran-tany amin'ny teknolojia fampianarana sy fanolorana orinasa. Avy amin'ny doc cams ka hatramin'ny ecran touche interactive, izahay irery no mpiara-miombon'antoka tonga miaraka amin'ny tsipika vokatra mitambatra tanteraka (ary azo ampifanarahana) izay mora ampiasaina sy mora amin'ny tetibola. Rehefa avy nanao izany nandritra ny efa ho 20 taona izahay, dia azonay ny fomba fiasa. miaraka amin'ny rehetra manomboka amin'ny CEO sy CTO ka hatramin'ny mpitantana ny distrika sy ny mpampianatra ao an-dakilasy. QOMO dia mitondra vahaolana tsotra indrindra sy azo takarina izay manampy ny tsirairay hankafy izay ataony tsara indrindra.
Qomo dia manolo-tena hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fahombiazan'ny asa manerana izao tontolo izao. Hanome anao ny vahaolana tsotra sy azo takarina indrindra izahay izay manampy anao hankafy ny zavatra ataonao.
Ary ampifandraiso amin'ny fitaovana elektronika marani-tsaina Qomo ireo loharanon-karena fanabeazana rehetra.
Nahoana no misafidy Qomo?
Ny ekipa R&D anay dia ahitana teknisianina manana traikefa am-polony taona mahery amin'ny fitaovana sy rindrambaiko. Isaky ny vanim-potoana dia hanangona ny tamberin'ny mpanjifa sy ny fepetra takian'ny tsena izahay mba hanatsarana ny vokatray mba hamenoana ny fitakian'ny tsena. Kendrenay ny hamolavola ny vokatra marani-tsaina indrindra amin'ny vidiny ara-toekarena sy kalitao tsara indrindra!
Manaiky OEM/ODM miaraka amin'ny teti-bolanao
Amin'ny maha-mpanamboatra azy dia manaiky ny OEM sy ODM izay hihaona amin'ny tanjonao sy ny tsenanao. Azo antoka fa azonao ampiasaina ny fitaovana elektronika marani-tsainay mba hampidirana amin'ny rindrambaiko manokana. Ary Qomo dia hanome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny efitrano fianarana mahay. Ataovy mora kokoa amin’ny mpianatra ny mandray anjara amin’ny kilasy tsy misy saro-kenatra.
Ny vokatra marani-tsaina avy amin'i Qomo dia manampy anao hampianatra, hifandray ary hiara-hiasa mora kokoa sy mahomby kokoa noho ny noeritreretinao. Rehefa manapa-kevitra ny hisafidy an'i Qomo ho mpamatsy anao ianao dia hanome anao serivisy feno amin'ny fampiasana torolàlana sy fanohanana.
Ary isan-taona dia hanatrika ny ISE/Infocomn izahay. Azonao atao ny manamarina mora foana ny vokatray na dia tsy nitsidika ny orinasanay aza ianao.